Cunto: Sidee loo xakameyn karaa Daawooyinka Darajada Ghost ee laga soo Saaro Goobtaada
Haddii aad marmar mariso Google Analytics, waxaa lagaa rabaa in aad hesho qaar ka mid ah dadka soo gudbiya gaadiidka ee taagan. Xaqiiqda ah inay sii socdaan warbixinnada taraafikadu waxay muujinayaan in qofku u dirayo taraafikada goobta. Xitaa sidaas, ma aha dhammaan dadka soo gudbiya inay metelaan dadka dhabta ah. Waxaa jira kuwa aad u baahan tahay inaad ka hortagto goobtaada.
Qodobka soo socda, oo ay bixiso Oliver King, khabiir sare ah oo ka socda Semaat , wuxuu daboolayaa habka ka saaraya dadka aan loo baahnayn - вітання з днем народження проза. Xaaladdan, Darodar waa khadadka been-abuurka ah, laakiin habka ayaa sidoo kale waxtar u leh dadka kale ee aan loo baahnayn.
Waxaan dareemay waxqabadyo aan caadi aheyn oo soo gudbineysa magaca Daroor. Tixraaca domainka ayaa sii waday in uu ka muuqdo qoritaankayga kaas oo igu dhiirigeliyay inaan booqdo goobta oo aan eegno waxa ay ahaayeenba. Macluumaadka aan helay halkaas ayaa cadeeyay in ay ahayd qalab sahlan oo SEO ah. Waxaan u maleynayaa in ay ahayd goob sahlan oo goobta xogta ka soo uruurisa meeshana aan u rogo. Ka dib markii lala yeeshay xubno ka mid ah koox online ah oo ku saabsan mawduuca Daroorka, waxay igu soo baxday in dhibaatada ay aad uga weyntahay sidii aan u maleeyay
Darodar waxaa loo yaqaan caado aad u caan ah oo diraya dirawiraha gudbinta mareegaha mulkiilayaasha badan. Waxaa lagu eedeeyey in ay ku faafinayaan spam adigoo isticmaalaya qalabka loo yaqaan "malware" kaas oo lagu dhex mari karo botnet. Inkastoo aanad ahayn dhibbanaha weerarkan, waxaa lagugula talinayaa in aad qaaddo tallaabooyin taxadar ah si aad uga xayirto goobtaada xariirka khayaanada..
Ka hortagga Daroor in laga soo galo goobtaada
Tallaabada ugu horreysa ee la qaadayo waa in la xakameeyo dhammaan meelaha laga shakiyo iyadoo loo marayo faylka .htaccess. Bog kasta oo isticmaala WordPress wuxuu heystaa faylkan ku yaala bogga asalka ah ee rootiga. Waxaad ka heli kartaa xeerarka si aad u isticmaasho Paul Thompson ka Buzzwords Business. Marka aad haysato koodhka, fur faylkaaga .htaccess-kaaga oo ku dheji hoose. Keydso xogta cusub. Waxay hubin doontaa in goobtaada aysan ka iman weerarrada ka imanaysa meelaha ay ku taxan yihiin oo ay adeegsadeen kuwa soo gudbinta ka dibna. Waxaa muhiim ah in la ogaado in gudbiyeyaasha been-abuurka ahi ay leeyihiin meelo badan oo la tuuro oo ay isbeddelaan wakhti kasta. Sidaa darteed, had iyo jeer taxaddar oo sii wanaajinta faylka .htaccess.
Tallaabada xigta waa inaad hubiso inaad ka saarto dhammaan raadadka Daroor ee Google Analytics. Waa muhiim in la sameeyo tan iyadoo hubinaysa saxsanaanta GA-baareenta iyo warbixinnada. Fursadaha ayaa ah in heerarka soo noqoshada ee ka yimaadda booqashooyin badan oo ka yimaada Daroor ay heystaan ​​dhammaan xogta oo dhan. Ka saarida soo-dirayaasha isticmaala xeeladaha la midka ah ee dariiqa Daroorka hubiya in e-commerce raadinta iyo kormeerka Google Analytics ma ay ku xisaabtamaan mustaqbalka. Maaha arrin la taaban karo haddii miyir la'aanta ay tahay mid la taaban karo ama aan ahayn, iyada oo aysan jirin duruufuhu waa inay ku saleynayaan go'aanadooda ku saabsan qaladaadka ama qalad aan sax ahayn.
Booska hadda la joogo wuxuu qeexayaa hababka loo isticmaalo in lagu xakameeyo daroogada daroogada ee goobtaada. Warka wanaagsani waa in qaabkani u shaqeeyo qof kasta oo aan loo baahnayn oo aad rabto inaad ka hortagto goobtaada. Labadani waxay kaa caawin doonaan sidii looga hortagi lahaa tirakoobyadaada mustaqbalka.